Tusaha MA ee Miisaanka Leh Ganacsiga Ikhtiyaarka ikhtiyaariga ah | vfxAlert official blog
Miisaanka MA: Celceliska Dhaqdhaqaaqa had iyo jeer waa faaiido
Muranka waxaa loo adeegsan karaa cryptocurrencies aaladaha falanqaynta farsamooyinka “classic” ayaa socday sanado badan. Haa, suuqa crypto ma laha nuxur dhaqaale oo dhab ah aadna waa mala awaal. Laakiin, waxaad ku heli kartaa faa'ido xasilloon tilmaamayaasha . Aynu aragno sida loo sameeyo waqtiga la tijaabiyey kala duwanaanshaha Dhaqdhaqaaqa
Hantida ganacsiga : Wax kasta oo ikhtiyaarro u ah calaamadda ganacsiga s. Shuruudda ugu weyni waa mid go'an (2-3 dhibcood) oo aan lahayn khidmado qarsoon.
Celceliska Dhaqdhaqaaqa Shan Miisaan leh (WMA) . Xilliyada 5, 14 iyo 15, waxaa jiri doona kuwa "dhakhso leh", kuwaas oo aan u tixgelin doonno calaamadaha ganacsiga crypto dib -u -celinta gaaban iyo hagaajinta. Qodobbada furan / dhicitaanka ee ikhtiyaarrada ayaa u dhexayn doona ama ka sarreeya. WMA oo leh muddo 30 waxay noqon doontaa "gaabis", oo qeexaysa jihada guud iyo qodobbada bilowga isbeddelka isbeddelka.
RSI oo leh 14 iyo heer dheeri ah 70/30 . Tilmaamayaasha is -beddelka ah waa in la xaqiijiyaa ugu yaraan hal oscillator oo tilmaamaya xad -dhaaf ah, marka iibsadayaashu aysan sii kicin karin sicirka, ama dib -u -iibin halkaas oo ku dhawaad aysan jirin qof suuqa crypto ku iibiya qiimo jaban.
Calaamadaha ganacsiga Crypto :
UP (WAC) - doorasho . Qiimuhu wuxuu ka sarreeyaa dhammaan WMA, RSI waxay ka sii socotaa aagga xad -dhaafka ah ama waxay ka sarreysaa heerka 50.
DOWN (PUT) - doorasho . Calaamadaha ka soo horjeeda crypto: Qiimuhu wuxuu ka hooseeyaa WMA, RSI wuxuu ka guurayaa xad -dhaaf ama wuxuu ka hooseeyaa heerka 50.
Muhiim: WMA waxay leedahay dib -u -dhac yar marka loo eego kuwa fudud iyo kuwa baaxadda leh, laakiin gebi ahaanba kama takhalusi kartid. Haddii qiimuhu jabo “gaabis” oo RSI ay ka baxdo aag xad dhaaf ah/xad -dhaaf ah, waxaad isku dayi kartaa inaad furto xirfadaha cryptocurrency .
Furan ganacsi shumaca xiga kadib ikhtiyaarrada ikhtiyaariga ah calaamado lacag la’aan ah . Wakhtiga uu dhacayo ikhtiyaarradu waa inaysan ka yarayn 15-20 daqiiqo xitaa haddii waqtiga shaqada loo doorto 5 daqiiqo, sida fiidiyahayaga.
Isbeddellada xooggan ka dib, RSI, sida oscillator -ka kale ee xad -dhaafka ah/xad -dhaafka ah, wuxuu muddo dheer “ku tuman karaa” aagagga muhiimka ah ama u dhow heerka 50 isagoo aan ka tallaabin. Isla mar ahaantaana, WMA waxay bixin kartaa calaamado ganacsi oo xoog leh oo loogu talagalay ikhtiyaarrada furitaanka. Si aad u aqbasho calaamadahaan inay shaqeeyaan iyo in kale, qof walba waa inuu go'aansadaa nafsadiisa, laakiin wali, bilowga, waxaa fiican inaad sugto barta gelitaanka oo si buuxda loo sameeyay.
Bitcoin waxay saldhig u noqon doontaa istiraatiijiyad kasta oo ganacsi crypto. Lacagaha kale ayaa soo raaca, in kasta oo dib u dhac ku yimid. Marka laga reebo Ethereum - waxaa jira dib -u -dhacyo iyo sixitaanno iska soo horjeeda. Tani badanaa waa kiiska marka la daabacayo dhacdooyin muhiim ah oo ku saabsan lacagta, falalka mala-awaalka ah waa kuwo gaaban oo ku dhawaad ma dhacaan.
Maalinta crypto ganacsi on AltCoin waa mid aad u kacsan iyo maamulka lacagta adag tahay in la raaco. Tilmaamayaasha tilmaamaya tilmaamayaasha waxay muujiyeen natiijooyin wanaagsan oo ku aaddan hantida badankooda intaan la beddelin.
Aan soo koobno . Celceliska Dhaqdhaqaaqa Miisaanka leh ayaa faa'iido u yeelan doona sanado badan oo soo socda. Kani waa aalad caadi ah oo dhammaan ganacsatadu yaqaaniin. Badankoodu waxay u dhaqmi doonaan si la mid ah "sida ku qoran buugga", taas oo macnaheedu yahay in suurtogalnimada saadaasha saxda ahi ay sarrayso. Celceliska Dhaqdhaqaaqa waa inuu ku jiraa calaamado crypto kasta. Laakiin, ma aha inay noqoto qodobka keliya ee go'aan qaadashada. Waxaan mar walba raadineynaa xaqiijin dheeraad ah !